दैनिक जीवनमा प्राकृतिक प्रसाधन सामग्री - व्यावहारिक प्रयोगका लागि सुझाव
प्रार्थ प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्री को बारे मा जान्दछन्
केयर उत्पादनहरू मुख्य रूपमा छाला सफा गर्न र यसलाई सुन्दर बनाउनुपर्दछ। धेरै उत्पादनहरू स्वास्थ्यमा हानिकारक छन्। क्यान्सरका धेरै सामग्री रोगहरूसँग जोडिएको छ। त्यस कारणको लागि, तपाईले प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्रीहरू मनपर्छ र रसायनहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नु पर्दैन।
निस्सन्देह प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्री संग
प्राकृतिक कस्मेटिक्सबाट बनाइएका गेलहरू स्नान गर्नुहोस्, किङको भेला, अनार, रगत नारंगी र अधिक धेरै प्रकारका विभिन्न किस्महरूमा उपलब्ध छन्। सामान्य शवर जेलले खनिज तेल प्रयोग गर्दछ। प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्रीमा तपाईं नरिवल तेल पाउनुहुनेछ। विशेष गरी सूखी वा संवेदनशील छालाको लागि, यो राम्रोसँग उपयुक्त छ किनकी यसले छालालाई घटाउन सक्दैन।
प्राकृतिक कस्मेटिक्स संग सुझावहरू बनाउनुहोस्
कार्बनिक स्व-ट्यानर पनि संवेदनशील छालाले राम्रोसँग सहन सक्छ, किनकि तिनीहरू विशेष गरी छालामा दयालु हुन्छन्। तर - त्यहाँ सर्वोत्तम स्व-ट्यानर छैन, किनभने प्रत्येक छाला फरक फरक छ। जैविक स्व-ट्यानरहरू मात्र हर्बल र हानिकारक सामग्री छन्। तपाईंले अनुहार र शरीरको लागि स्व-ट्यानरलाई अलग गर्नु पर्छ। अनुहार शरीर भन्दा सोरको उजागर हुन्छ।
प्राकृतिक कस्मेटिक्सको रूपमा सनस्क्रीनले मात्र खनिज सनस्क्रिन समावेश गर्दछ। यसले सूर्यलाई जस्तै दर्पणलाई झल्काउँछ। विशेषतया धेरै संवेदनशील छालाको साथ तपाईंले प्राकृतिक कस्मेटिक सूर्य क्यान्सर प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो छालामा रहन्छ र यसरी पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्छ।
बाल स्टाइल उत्पादनहरु
प्रकृति मा बालों को जेल र बाल स्प्रे - गुणवत्ता न केवल पर्यावरण को लागि राम्रो छ, तर संवेदनशील खोपडी को मान्छे को लागि पनि। कार्बनिक कपाल स्प्रेले प्रोभेलेंट, मेटल डिब्बे, कृत्रिम सुगन्ध र सिलिकोनहरू समावेश गर्दैन र अझै बाल राम्रो राम्रो र ठूलो चमक दिन्छ।
यसबाहेक, प्राकृतिक कस्मेटिक्समा सबै बाल रङहरू छन्। प्राकृतिक रंगहरु कोट जस्तै बाल को आसपास लपेटो। प्राकृतिक जडीबुटीले कपाल पूर्णता र चमक दिन्छ। बिरुवाको कपाल को रंग कुनै संरक्षक छैन, कुनै कृत्रिम रंग र कुनै कृत्रिम additives। कपाल कपाल रंगले पनि तपाईंको कपालको संरचनालाई हानि गर्दैन।
Geranium को तेल केवल प्रभावशाली र शक्तिशाली रूपमा शुद्ध विटामिन ए हुनुपर्छ। विशेष रूप देखि ब्रेको बैक्टीरिया नमी बांडने वाला हायडुरनिक एसिड उत्पादन गर्दछ। यसले छालालाई कुनै समयमा साना र अधिक पनी लगाउँदछ।
पाउडर, काजल, आईवडोडो एन्ड कं
मेकअपको लागि जैविक उत्पादनको एक विस्तृत चयन पनि छ। उनीहरूको राम्रो अनुकूलताको लागि धन्यवाद, तिनीहरू विशेष गरी संवेदनशील छाला प्रकारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। प्रायः तिनीहरूसँग अवयवहरू छन् जसमा एक पोषण र सुखदायक असर छ। तपाईंलाई प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्रीको लागी चमक र चमक प्रभाव बिना काम गर्न को लागी छैन। कार्बनिक आधारमा अधिक र अधिक प्रसाधन सामग्री उत्पादन गरिँदैछ।
प्राकृतिक मस्जिदको साथ तपाईं लामो र उज्ज्वल स्तम्भहरू पाउनुहुन्छ। यसले एन्टिमेन्टहरू जस्तै क्यामेराना तेल समावेश गर्दछ। यो एक छिटो सुखाने को तेल हो जुन चाँडै हावामा सेट गर्दछ, धब्बा नगर्ने र टुक्रा गर्दैन।
रङ्गहीन हेरविचारको ढोकाहरू संगै, त्यहाँ प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्रीमा एक लुकाउने रातो पनि छ। कार्बनिक लिपस्टिकहरूमा कुनै खनिज तेल, संरक्षक वा कृत्रिम स्वाद छैन। तिनीहरू पोषणयुक्त कार्बनिक तेलहरू, ब्लस ओक्स अक्सिजन र कार्बनिक मोमहरू हुन्। त्यसकारण यदि तपाइँले तपाइँको मुखमा केही लिपस्टिक पाउनुभयो भने यसले कुनै कुरा गर्दैन।
प्राकृतिक कस्मेटिक्सहरू विशेष गरी संवेदनशील छालाको लागि प्रयोग गरिनु पर्दछ, तर तपाईं प्राकृतिक हेरचाह र वातावरणमा ध्यान दिनुहुन्छ भने।
प्राकृतिक प्रसाधन सामग्री एक नयाँ प्रवृत्ति हो। यो तपाईंको छाला पोषण गर्न र छालाको समस्या कम गर्न डिजाइन गरिएको छ। घटकहरू प्राकृतिक स्रोतहरूबाट निकालिन्छन्।
तपाईं प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्री कसरी चिन्नुहुन्छ?
धेरै उत्पादनहरू जस्तै "प्रकृति", "प्राकृतिक" वा "कार्बनिक" जस्ता कुराहरू छन्। तथापि, यी उत्पादनहरूमा अक्सर प्रायः प्राकृतिक पदार्थहरू छैनन्। प्याकिङमा के हो भनेर ठीक छ पढ्नुहोस्। त्यसोभए तपाइँ कसरी यो भन्न सक्नुहुन्छ कि यो वास्तवमा प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्री हो? प्राकृतिक प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्री को लागि तपाईंलाई गुणवत्ता मुल्य प्रदान गर्दछ। सीलहरू तपाईं भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, NATrue लेबल, ECOCERT सील र छाप BDHI नियन्त्रण प्राकृतिक प्रसाधन सामग्री। ब्रान्डहरू जुन यो सील छ, उदाहरणका लागि अल्भरडे, स्यान्ट, डा। Hauschka या Lavera।
प्राकृतिक कस्मेटिक्स र जैविक प्रसाधन सामाग्री को बीच के फरक छ?
अक्सर, प्राकृतिक कस्मेटिक्स गलत तरिकाले कार्बनिक प्रसाधन सामाग्री को लागि गलत छ। प्राकृतिक कस्मेटिक्समा पहिले नै उत्पादनहरू समावेश छन् जुन केवल जैविक अवयवहरूको कम सामग्री छ। प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्री सिंथेटिक र रासायनिक additives मा अझै पनि अनुमति छैन कि आवश्यक छैन। अर्कोतर्फ कार्बनिक प्रसाधन सामग्री, उच्च गुणस्तर, प्राकृतिक कच्चा मालहरू छन्; कुनै रासायनिक वा सिंथेटिक सहायकहरू छैनन्।
किन प्राकृतिक प्रसाधन सामग्री?
प्राकृतिक कस्मेटिक्सले तपाईंको छाला तामाङ र विकृत गर्नुपर्छ। यो हानिकारक र हार्मोन-परिवर्तन सामग्रीबाट मुक्त छ। प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्री पारंपरिक छाला प्रसाधन सामाग्री को तुलना मा सबै केहि कम नहीं गर्छन, यसले उनलाई आत्म-विनियम को उत्तेजित गर्दछ। एक प्राकृतिक कस्मेटिक मुहर संग निर्माताहरु निष्पक्ष कार्य परिस्थितियों र पर्यावरण संरक्षण को प्रतिबद्धता को पुष्टि र को बढ़ावा। यसको अतिरिक्त, प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्री मा प्रश्न को बाहिर जान्छ। प्राकृतिक कस्मेटिक्समा मात्र प्राकृतिक सुगंध र रंगहरू प्रयोग गरिन्छ। कृत्रिम सुगन्धहरू छिट्टै संवेदनशील नाकहरू जोगाउन सक्छ। साधारण मेकअप प्रयोग गरेर, यो तहमा छाला राम्रोसँग साँढ्न सक्दैन। प्राकृतिक अवयवहरूका साथ प्रसाधन सामग्री, तथापि, लग लाइटर र फ्रिज बनाउन।
प्राकृतिक कस्मेटिक्स को लागी संक्रमण के हो?
प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्री छाला को प्राकृतिक शक्तियों को सक्रिय गर्दछ, यसैले यो पहिलो गिरावट दिन सक्छ। अध्यापनहरू प्रारम्भमा वृद्धि गर्न सक्दछ, जबसम्म छालाले आत्म-नियमनमा समायोजन गरेको छैन। उदाहरणको लागि, पारंपरिक रात क्रेनको विपरीत, रातमा कुनै तेल वा फ्याट प्रयोग नगर्ने, तर एक जलीय सीरम। सूखी छालाको लागि, यो थोडा समयको लागि असामान्य हुन सक्छ। तर छालाले कम वजन कम गर्न सक्छ र रातमा राम्ररी पुनरुत्थान गर्न सक्छ। तपाईंलाई छालाको समय दिनुपर्छ, उत्पादन उत्पादनको साथ रहन महत्त्वपूर्ण छ। छाला सामान्यतया समायोजन गर्न एक महिना लाग्छ।
प्राकृतिक प्रसाधन सामाग्री मा धेरै राम्रो चीजहरू छन्। तपाईंको छाला यसको प्रयोग गर्न र राम्रो दृष्य संग चमक गर्नेछ।
प्राकृतिक प्रसाधन सामग्री - बगैचाबाट प्रसाधन सामग्री
प्राकृतिक प्रसाधन सामग्री - जो फल तपाईंलाई अझ राम्रा बनाउछ
प्राकृतिक कस्मेटिक्स आफैलाई बनाउनुहोस्
घरको लागि प्राकृतिक कस्मेटिक्स व्यञ्जनहरू